Kanjani. Ama-backlink edu angathonya isayithi lakho SEO?
Ama-backlink e-Edu abhekwa njengewusizo kakhulu njengoba avela ezizindeni ezinokwethenjelwa nezihloniphekile. Zivame ukusetshenziswa ngamakholeji, amanyuvesi, izikole eziphakeme kanye nezinye izikhungo zemfundo. Njengoba beletha inani kubasebenzisi, i-Google iwazisa kakhulu futhi iphakamisa phezulu ku-SERP.
Kuthatha isikhathi esiningi nemizamo yokuthola izixhumanisi kusuka kumawebhusayithi anjalo - kangaroo leather hat. Kodwa-ke, inzuzo yukuthi akufanele ukuthi ngokusobala ube uchwepheshe kwinsimu ethile yemfundo ukuze uthole i-backlink kusuka kuso kuya kusayithi lakho.
Uma unzima ukuthola izinga. edu backlinks kuya kusayithi lakho, lokhu okuthunyelwe kuzokubaluleka kuwe njengoba ngibutha lapha wonke amasu wokwakha ama-trade link.
Izinzuzo ze. ama-backlink edu
i-Google iyazisa kakhulu yonke i-edu. izizinda futhi kamuva zizoheha isayithi lakho njengendlela ehambelanayo kakhulu uma uthola izixhumanisi zangaphandle ezivela kulezi zizinda;
Yonke imithombo yewebhu yemfundo iphezulu yekhwalithi futhi inenani labasebenzisi;
Ukubeka isixhumanisi sakho. domain domain, uzothola eziningi traffic okuhlosiwe ukuthi kuyoba lula ukuguqula;
Thola inani leqiniso lewebhusayithi.
Indlela yokwakha ikhwalithi. edu backlinks?
Ukwakha ubuhlobo obuhle namayunivesithi nezikole eziphakeme, unganikeza abafundi babo izibonelelo kanye nezifundo.
Ungaqala ukwenza usesho lwewebhu ngezikhungo zemfundo nge-Google noma ezinye iziteshi zendawo ezingakunika ulwazi olufanele kumbuzo wakho. Qinisekisa, isikhungo semfundo oyikhethayo sinokuvakasha eziningi noma ubuze ukuthi inyuvesi noma isikole sinomphakathi. Finyelela kubantu abaphethe la miphakathi. Ngokusekelwe embonini yakho noma imikhiqizo oyithengisayo, ungahlinzeka. imithombo ye-edu enezinzuzo ezahlukene ngokubuyisela emuva kwe-backlinks. Ngokwesibonelo, uma uthengisa imishini yezemidlalo, ungahlinzeka ngemfundo kubafundi abakhulu kakhulu ezemidlalo. Uma ukwazi ukuthola i-backlink encane kusuka. umthombo wewebhu we-edu okungenani ohambisana niche yakho yezimakethe, bese ungeza inani elikhulu kuphrofayela yakho ye-backlink.
Nikeza izaphulelo kubafundi
Uma uthengisa ngeminye imikhiqizo engabasiza abafundi ngezidingo zabo zansuku zonke, ungazama ukuthola ama-backlink ngokubuyisela izaphulelo. Nikeza abafundi iziphakamiso nezipho ezihlukile. Imikhiqizo yakho ingaba imiseli noma imiklamo yesofthiwe engasiza abafundi ekuphishekeleni inkambo yabo. Udinga ukucela umfundisi weyunivesithi ukuthi ashicilele isipho sakho kuwebhusayithi yesikhungo.
Dala okuqukethwe okuzoba nesithakazelo kubafundi
Ngeke uthole ama-backlink quality. amasayithi e-edu, uma okuqukethwe kwakho kuwebhusayithi kunanoma yiliphi inani labafundi. Akekho ofuna ukufunda okuqukethwe kwe-crappy ngokuqinisekile.
Iningi lezikhungo zemfundo zigcina amabhulogi kubafundi. Ungacela ukushicilela izihloko zakho ezifanele futhi ezicwaningweni ezisekelwe kulolu bhulogi noma ukuthumela izimpendulo ezihlakaniphile kumbuzo umfundi.